भर्खर सिलाई व्यवसायमा लागेकाहरु विस्थापित हुने अवस्था छ , महासंघ सचिव कटुवाल | Rajmarga
कोरोना महामारीले बजार ठप्प रहेको छ । सबै खाले पेशा तथा व्यवसायीहरु अहिले आंसिक रुपमा मात्र सञ्चालनमा छन् । कतिपय कम्पनीहरुले यो बेला कर्मचारीहरुलाई निकालेका पनि छन् । नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायीहरुको अवस्था के छ । कसरी सञ्चालन भइरहेको छ । यसै बिषयमा नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सचिव सरोज कटुवालसँग राजमार्गका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
कोरोना महामारीले व्यवसायमा कस्तो असर परिरहेको छ ?
अहिले यो महामारीको अवस्थामा सिलाई व्यवसायमा लागेकाहरुलाई मात्र हैन सबै व्यवसायीहरुलाई धेरै समस्या रहेको छ । हामीलाइलाई अलि बढी समस्या छ । तर हामी सिलाई व्यवसायीमा लागेकाहरुलाई धेरै समस्या भएको छ । हामी यो पेसा तथा व्यवसायमा लागेकाहरु सञ्चालक मात्र हैन यसमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई पनि समस्या भएको छ । अहिले काम गर्न पाएका छैनौं । सबै कारखानाहरु बन्द छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा रहेका मजदुर तथा कालिगडहरुलाई पनि समस्या भएको छ ।
अहिले सिलाई व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले पसल खोल्न पाइन्न । हामी भनेको सिधा उपभोक्तासँग जोडिने हो । पसल नखोले पछि उपभोक्तासँग हामी जोडिन पाउँदैनौं । उपभोक्ता नभए पछि हामीले कारखाना खोल्ल सक्ने अवस्था छैन । महामारीको कारण प्रशासनले पसल खोल्न निश्चित समय दिएको छ । त्यसैले एकदम हामी नाजुक अवस्थामा पुगेका छौं । उपभोक्ता आउने र नाप दिने कपडा अर्डर गर्ने र सिलाउने हुन्छ । त्यसो हुँदा अहिले यो महामारीको अवस्थाले सबै भन्दा नाजुक अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।
कोरोना महामारी बीचमा व्यवसाय कसरी चलाइरहनु भएको छ ?
अहिले त हाम्रो व्यवसाय ठप्प छ । यो बेलामा हाम्रो सिजन हो । स्कुल कलेज लाग्ने तथा अन्य सुभ कार्यहरु पनि गर्ने बेला हो । तर यही बेलामा महामारी लाग्यो । हामीले पसल खाल्ने वातावरण भएन । हामी स्कुल कलेजहरु पनि सञ्चालन हुने अवस्था रहेन । मजुरहरु पनि अहिले बेरोजगार भएका छन् ।
व्यवसायीको समस्या के के छन् ?
यो हामारीले हाम्रो व्यापार ठप्प छ । हामीले व्यापार गर्न पायनौं । ५–६ महिनाको घर भाडा तिर्न समस्या छ । व्यवसायीक कर तिर्न समस्या छ । अर्को कुरा हामीले काममा राखेका मजुरहरुलाई पनि सेवा सुविधा दिन सकेको छैनौं । हामीले लगाएका ति कामदारहरु घर जानु भएको छ । उहाँहरुलाइ हामीले तुरुन्त काममा फर्काउने अवस्था छैन । यही समय अब केही महिना रहदा उहाँहरुको काम खोसिने अवस्था छ ।
घरभाडा तथा व्यवसाय कर तिर्न आम रुपमा सामस्या भएको देखिन्छ, तपाईहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?
अहिले करको बिषयमा एकदम समस्या छ । अहिले आंशिक रुपमा पसल खोल्न दिएको छ । तर पसल खोल्ने र बन्द गर्ने अवस्था मात्र छ । बोहनी नभइकन दिन बित्छ । सानो रुपमा भर्खर व्यवसाय गर्नेहरुलाई त यो पेशामा रहन नी समस्या भएको छ । अलि ठुलो तथा स्थापित अवस्थामा रहेको व्यवसायीलाइ पनि उतिकै समस्या रहेको छ । घर भाडा, कर, किस्ता यी सबै कुराले धेरै समस्या भएको छ ।
महामारीको बीचमा सरकारसङ के अपेक्षा गर्नु हुन्छ ?
हामीले सरकारसँग बैंकको व्याज,कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं । त्यसका लागि हामीले बिभिन्न जिल्लाको शाखा कार्यलय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने काम पनि गरिरहेका छौं ।
Previous post: गृह मन्त्रालयद्वारा साउन २९ गतेदेखि सवारी पास बन्द गर्ने निर्णय
Next post: थाहा पाइराख्नुस आज बिहीबारको राशिफलमा कस्तो छ तपाईको भाग्य
कैलाली र कञ्चनपुरमा हावाहुरीले दुई जनाको मृत्यु, भोलिसम्म पानी र हावाहुरीको सम्भावना
आज चक्रवाती तूफान ‘वायु’ को सामान्य प्रभाव देखिने, सचेत रहन आग्रह